Nyochaa: "Onye na-edozi isi nke Ngalaba Blue", nke José Ignacio Cordero | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Nyochaa: «Onye na-edozi isi nke Blue Division», nke José Ignacio Cordero dere
Onye na-edozi isi nke Ngalaba Blue bụ akụkọ na-akọwa nlanarị nke nwoke dị mfe nke mikpuru onwe ya, na-atụghị anya ya, na ụfọdụ n'ime ihe ndị kacha mkpa mere na narị afọ nke XNUMX na Spain na Europe. Jose Ignacio Cordero, na usoro doro anya na nke miri emi, juputara nuances na ọgụgụ isi, ọ na-abanye n'olu otu agadi nwoke nke na-agwa ndụ ya site na ebe ọ nwere ike icheta. Ọ bụ akwụkwọ na-adọrọ adọrọ ma dịkwa mfe ọgụgụ, ya ejirila m gụgharịa m na peeji mbụ.
Kedu mgbe Akwụkwọ Altera Ha nwere obi ọma wee zitere m otu akwụkwọ a, echeghị m na m ga-ahụ akwụkwọ dịka nke a. O teela m nọ kemgbe akụkọ mere m otu a. Enweela m obi ụtọ ịgụ akwụkwọ mmikpu a, nke a na-edepụta ma na-echepụta nke ọma karịa mgbe ọ bụla ọzọ. N'ịkwado ọmarịcha akwụkwọ ọgụgụ na ọdịnala egwu, yana ihe ọmụma miri emi banyere akụkọ ihe mere eme na ndị mmadụ, Cordero na-akọwa Extremadura na-ata ahụhụ site na nhụsianya na Spain nke doro anya na agha siri ike, ọ bụghị naanị maka enweghị ụkọ ego.
Antonio, onye protagonist, na-akọ akụkọ ya na anya ileghachi anya. Akụkọ malitere na afọ iri nke 20 nke XNUMX, na obere obodo Extremaduran. Ọ bụ ọkpara nke ụmụnne anọ. Ezinụlọ ya enweghị ego, mana ụlọ ahụ na-efu ọtụtụ ihe. N'ịbụ ndị a manyere ịrụ ọrụ n'ịchịkọta na ire nkụ n'ihi na nna ha enweghị ọrụ, Antonio na ụmụnne ya ndị nwoke na ụmụaka nwere ọtụtụ nsogbu akụ na ụba na nke mmetụta uche.
Antonio, bụ nwa nwoke dị jụụ nke na-enweghị ọmụmụ ihe, na-enweghị ọrụ ma ọ bụ uru, dị ka ha na-ekwu, ka mụrụ ọrụ na onye na-edozi isi ụmụ nwoke. N'ebe a anyị malitere ịghọta ezigbo nuance nke aha ahụ, ebe ọ bụ na, n'oge ahụ, ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị ka a kpọọ ndị na-edozi ntutu isi ndị nwoke. Don Melquiades ga - abụ otu n’ime ihe ndị kachasị mkpa na ndụ Antonio, ọ bụghị naanị n’ihi na ọ kuziri ya ịkpụ ntutu, ọrụ nke na - agaghị adị mkpa na ngalaba Blue. Otú ọ dị, ihe ọ ga-amụta na nwoke a, gabiga inye ezigbo snips, nke ahụ ga-adị mkpa ruo na njedebe nke akụkọ ahụ.
Anyị maara site na aha na nke a bụ akụkọ akụkọ ifo. Yabụ, anyị matara site na mbido ihe usoro izugbe ga-eme. Esemokwu a, iche echiche "ihe ga - eme mgbe ..." na, na nke a, "kedu akụkụ ọ ga - egwu", bụ ụfọdụ n'ime ajụjụ ndị na - ebiliteghi. Anyị maara na Agha Obodo ga-amalite mgbe Antonio na-alụ ọgụ. Anyị makwaara na ọ ga - emesịa nkewa na ọgụ megide ọchịchị Kọmunist na Russia. Anyị ma na ọ bịara ịkọ ya, ebe ọ bụ na ọ na-akọ akụkọ ahụ, dịka anyị siri kwuo, na-echeta ihe ndị mere n’oge gara aga. Esemokwu ahụ na-enye ya ihe nkiri pụrụ iche.
Ma ihe nkiri ka ukwuu na-enye akụkọ a leiv na-akpali na Antonio dọkpụrụ na nrọ ya, na-agbasasị dị ka ebumnuche nrọ na, na-enweghị ịdọ aka ná ntị, na-eju anyị anya n'oge ọhụụ. Nke ahụ leiv na-akpali ọ bụ snow. Na mbụ ọ na-eju anya, n'ihi na ọ bụghị na snow na-ada ọtụtụ na Extremadura, mana ka nrọ na-emeghachi onwe ha, ha na-ebu akụkọ ahụ na-enwe isi, n'agbanyeghị etu ọnọdụ ndị a na-enweghị isi si yie. Nrọ ndị a nile na-eduga na ihe na, dịka ihe ahụ ghọrọ ihe gara aga na onye protagonist meriri ya, snow na-apụ n'anya. Anwansi nke akụkọ akụkọ a na-emepụta na akụkọ ahụ na-adọrọ mmasị.
Nkịtị nkịtị Antonio bụ otu n'ime àgwà ya kacha pụta ìhè. Nkịtị nke ga-abụ onye protagonist n'ọtụtụ oge ikpebi na nke ụfọdụ n'ime ọnọdụ kachasị mkpa n'akụkọ ihe mere eme ga-adabere.
Joszọ José Ignacio Cordero si jikọta m juru m anya ma dozie ihe niile dị na atụmatụ ahụ. Onweghi ihe anabataghị na mberede, ọdịghị mkpụrụedemede, enweghị nkebi ahịrịokwu, enweghị eziokwu, enweghị ahịrịokwu; ọ bụrụgodị na ha adịchaghị mkpa, ha na-enwe njedebe ma ọ bụ ihe ọ pụtara mgbe nile. N'ime mkpebi ndị a, anyị na-ahụ site na asịrị kachasị nwee ọgụgụ isi gaa na njakịrị kachasị mma. Ọbụna n'iji ọchị, Cordero nwere ike idozi ụfọdụ ọnọdụ kacha sie ike na akụkọ ntolite, na-ahapụghị ihe njirimara ya pụtara. Ma ọ hapụghị njedebe ọbụla. Akwukwo obula nke putara nwere akuko, ma akuko ndia nile ka edoziworo.
Nke a bụ akụkọ banyere dike nke na-adịghị eche dị ka dike, onye lanarịrị dịka o nwere ike, onye buru ụzọ lụọ ọgụ ebe ọ metụrụ aka na ebe o kwenyere na ya nwere ike ịgbapụta onwe ya yana, na mberede, gbanwee ndụ ya. Ọ na-egosipụtakwa echiche nke nwata nwoke anaghị alụ ọgụ maka echiche, mana n'ihi na ọ bụ nke ya, n'ihi na ọ bụ ịlụ ọgụ ma ọ bụ ịnwụ. Dị ka ọ dị ọtụtụ ndị ọzọ, ọ naghị aghọta agha, mana ọ nweghị ụzọ ọzọ. Mgbe ọ nọrọ n’ihu n’afọ ofufo, ọ na-achọpụta na nke a dị iche na nke o chere n’echiche, na ọ maghị nke ọma onye “ọjọọ” ahụ bụ. Cordero gosipụtara heroism dị ka ụzọ isi na-atụ aro ndị na-eto eto, dịka placebo iji kasie ndị nne na nna na ndị inyom di ha nwụrụ obi, dị ka ihe nrite iji kweta na ihe a na-apụghị ịkọwa.
Mwute adịghị njọ, ọ na-adị mfe iwepụ ya
Nke a bụ echiche m si na akwụkwọ a, nke kacha emetụta m. Maka na akụkọ a na-ewute, na-agbawa obi. Nke a bụ otu n'ime ihe Don Melquiades, nwoke gụrụ akwụkwọ, n'agbanyeghị ọfịs ya, ga-agwa Antonio oge ụfọdụ, na ọ ga-echeta n'oge ya.
Ma akụkọ a na-egosikwa anyị na mwute adịghị ekwekọ na olile anya yana na, n'agbanyeghị mmejọ e mere, nhụsianya eburu, ihe mgbu gbakọtara, ohere nwere ike ibilite mgbe niile ịme ihe nke, ikekwe otu ụbọchị, ga-eme ka ahụ dị gị mma. nye ohere iji nye ndị ọzọ obi-ụtọ ahụ nke ị nweghi ma chọta n'ime ya ebe udo na mpako.
N'etiti ihe niile, uru nke ịgbachi nkịtị, nyocha na ntụgharị uche.
Onye na-edozi isi na ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Nyochaa: «Onye na-edozi isi nke Blue Division», nke José Ignacio Cordero dere
j j. Vicente L. Terol dijo
Ndewo, m ga-achọ ịma ma onye na-edozi isi nke na-acha anụnụ anụnụ dị na pdf.
Zaghachi j. Vicente L. Terol
Ana m ekele gị nke ukwuu Eva maka otito ị na-enye m, enwere m olileanya na m kwesịrị ha ma, karịa ihe niile, maka ekele ziri ezi gị nwere maka akwụkwọ ọgụgụ ahụ.
Zaghachi José Ignacio
Akwụkwọ 'emere na Andalusia'